Telefaona porofom-pipoahana sy telefaona-News-Ningbo Joiwo Explosion proof Technology Co., LTD
Telefaona porofon'ny fipoahana sy telefaona azo antoka
FIAINANA: 2019-09-11 HITS: 24
Ny telefaona porofon'ny fipoahana dia ampiasaina ao anatin'ny faritra Ex, rig solika, indostrian'ny petrochemical, refineries, ascenseur voa, sehatra ivelan'ny morontsiraka, fitrandrahana ary izay faritra mampidi-doza Ex izay ny gas sy ny vovoka miovaova no tena jerena. Ireo telefaona manaporofo ny fipoahana dia natao ho an'ny fifandraisana am-peo ao anatin'ny tontolo feno fankahalana izay zava-dehibe indrindra ny fahamendrehana, ny faharetana, ny fahombiazany ary ny fiarovana azy.
Ny telefaona manaporofo ny toetrandro dia azo ampiasaina amin'ny tokotanin-tsambo, dock, làlambe, lalantsara, fantsom-baravarana, ozinina, sambo fitrandrahana vy, tonelina fitaterana. Ny finday manamarina ny toetr'andro dia natsangana mba hanoherana sy hanohitra ny toe-piainana iainana, ka hihena ny fahasimbana mety hitranga.
Ningbo Joiwo Explosion-proof Science and Technology Co., Ltd dia manana laminasa famokarana voaomana ary manana mpanara-maso matihanina maro. Ankoatr'izay, Joiwo dia manana mari-pahaizana marim-pirenena marobe. Ny "centres-n'ny mpanjifa" no filozofianay momba ny asa aman-draharaha. Ny vokatra amidy amina firenena 20 mahery ary azo ampiasaina amin'ny indostria maro. Manana fifandraisana tsara amin'ny mpanjifa izahay. Mirehareha amin'ny fanolorana ny vokatra avo lenta sy maharitra indrindra amin'ny vidiny mifaninana indrindra izahay.
Joiwo Sales Team dia nanatrika ny hetsika fananganana ekipa mpivarotra tamin'ny faran'ny herinandro
Fahalalana momba ny vokatra voaporofo amin'ny fipoahana siansa malaza